सर्पदंशको उपचार खै ? - Naya Patrika
सर्पदंशको उपचार खै ?
काठमाडौं | भदौ १५, २०७५
बाराको कोल्हबी नगरपालिका भए पनि यहाँका सर्वसाधारणले अनेकौँ समस्या भोग्नुपरेको छ । कोल्हबी बजारमा विगतदेखि नै सर्पदंशको उपचार केन्द्र नभएकाले यहाँ सर्पदंशका बिरामीले विगतमा अकालमा ज्यान गुमाउनुपरिरहेको थियो । कोल्हबी नगरपालिका बनेको २ वर्ष बितिसक्दा पनि यहाँ सर्पदंशको उपचार केन्द्र स्थापना भएको थिएन ।
बल्लतल्ल ०७५ मा सर्पदंशको उपचार केन्द्र स्थापना भएपछि सर्वसाधरण निकै हर्षित भएका थिए । तर, अहिले स्थानीयवासी त्यहाँ उपचार गराउन जानसमेत डराइरहेका छन् । किनकि, डक्टरहरू ड्युटीकै समयमा पनि कोही बस्दैनन् भने रातको समयमा त डाक्टरको उपस्थितिको अपेक्षा गर्नु नै व्यर्थ हुने गरेको छ ।
हालसम्म यस उपचार केन्द्रका डाक्टरको लापर्बाहीले दुईजनाको ज्यान गइसकेको छ । गत ३० साउनको राति साढे ८ बजे कोल्हबी—२ बगेवाका दीपेन्द्र मैनालीलाई सर्पले डसेको थियो । उनलाई उपचारका लागि कोल्हबी उपचार केन्द्र लगियो । बिरामी त्यहाँ पुग्दा डाक्टर थिएनन् । पछि फोन गरेर बोलाउँदा १५–२० मिनेट समय लाग्यो । उनीहरूले वीरगन्ज रिफर गरे । मैनालीको बाटैमा मृत्यु भयो । यो दुःखदायी घटना हो । त्यहाँका जनप्रतिनिधिलाई आग्रह छ, अबदेखि यस विषयमा सहज रूपमा उपचार गराउन पाउने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
हाल : जोरपाटी